चिनियाँ सेनाको यो कार्यलाई दुनियाँले बनायो मजाक, सारा चीन लज्जित - जनबोली न्यूज नेटवर्क प्रा. लि
गृहपृष्ठ » समाचार » चिनियाँ सेनाको यो कार्यलाई दुनियाँले बनायो मजाक, सारा चीन लज्जित
काठमाडौं । विश्वमा चीन अरुको नक्कल गर्ने कुरामा पहिलो स्थानमा रहेको छ । यो बीचमा चिनियाँ सेनाको एक प्रचार भिडियो बाहिर आएको छ जुन एक हलिउड ब्लकबस्टर फिल्मको एक भिडियो क्लिप रहेको खुलेको छ । रिपोर्टका अनुसार चिनियाँ सेनाले आफ्नो बताएको यस भिडियोमा हलिउड ब्लकबस्टर फिल्म ‘ट्रान्सफार्मर’ र ‘द रक’ का क्लिप प्रयोग भएको छ।
चिनियाँ सेनाले आ–णवि–क ह–तिया–रधा–री एच–६ ब–मव–र्षकहरूले प्रशान्त टापु गुआमको अमेरिकी सैनिक अड्डामा जवाफी ह–म–ला गरेको दावा गरेको थियो । यसलाई चिनियाँ माइक्रोब्लगिंग प्लेटफर्म सिनो वेइबोमा लाखौं, करोडौं पटक हेरिएको छ । तर धेरै प्रयोगकर्ताहरूले यस भिडियोको खिल्ली उडाएका छन् । एक प्रयोगकर्ताले मजाक गर्दै लेख्यो, ‘चीनको लागि कुनै प्रतिलिपि अधिकार मुद्दा छैन ।’
अर्का एक प्रयोगकर्ताले लेखेका छन्, ‘एक अमेरिकी फिल्मबाट चोरिएको ? हाहाहा ।’ अर्को एक चिनियाँ प्रयोगकर्ताले लेखे, ‘यो कार्य खराब हो (अमेरिका) देशहरूको क्लिप प्रयोग नगर्नुहोस् । मान्छेहरूले यो ट्वीटरमा हेरिरहेका छन् र हामीलाई बेवकूफको रूपमा सोच्दैछन् ।’ यो दुई मिनेटको भिडियोलाई गड अफ वा–र अर्थात यु–द्धको भगवान नाम दिइएको छ । यो भिडियो शनिबार, चिनियाँ वायुसेना द्वारा जारी गरिएको थियो । नाटकीय प्रकारको संगीत पनि यस भिडियोमा प्रयोग भएको छ ।
यो भिडियोमा देखाइएको छ कि अमेरिकाको एन्डरसन बेस क्याम्पमा ह–म–ला गरिएको छ । चीनको सेनाद्धारा जारी गरिएको यस भिडियोमा लेखिएको छ, ‘यो हावा सुरक्षाबाट हाम्रो मातृभूमिलाई सुरक्षित राख्नु हो । पूर्ण विश्वास र क्षमताका साथ हामी आफ्नो मातृभूमिलाई आकाशबाट सुरक्षित गर्दछौं ।’
तर चिनियाँ सेनाको यो षडयन्त्रको भिडियो सामाजिक सञ्जालमा मजाकको विषय बन्न पुग्यो । मानिसहरूले यस भिडियोलाई खिल्ली उडाउँदै लेखेका छन् कि यसमा फिल्म ‘ट्रान्सफार्मर’ को क्लिप प्रयोग गरिएको छ । यस बाहेक, ‘द रक’ र ‘हर्ट लककर’ को भिडियो क्लिपहरू पनि प्रयोग गरिएका छन् । चिनियाँ सेनाले जनताको यो दाबीमा कुनै प्रतिक्रिया जनाएको छैन ।
चिनियाँ सेनाका एक निकट स्रोतले साउथ चाइना मर्निंङ पोस्टलाई भने कि सैन्य प्रचार विभागका लागि हलिउड चलचित्रको क्लिप प्रयोग गर्नु सामान्य कुरा हो । साउथ चाइना मर्निंङ पोस्टलाई सेना स्रोतले भन्यो, ‘सेनाको प्रचार विभागका प्रायः सबै अधिकारीहरूले हलिउडका फिल्महरू हेर्छन् । यस्तो अवस्थामा अमेरिकी यु–द्ध फिल्महरूको क्लिपहरू उनीहरुको दिमागमा बस्छ ।’
ताइवानमा अमेरिकी विदेश विभागका एक वरिष्ठ अधिकारीको भ्रमणपछि चिनियाँ सेनाहरूले ताइवानको नजिकै यु–द्ध तयारी गरिरहेका छन् । ताइवानले एक चीन नीति अन्तर्गत ताइवानलाई आफ्नो अंश मान्दछ । सिंगापुर सुरक्षा तथा रणनीति संस्थानका कोलिन कोहले समाचार एजेन्सी रोयटर्सलाई भने, ‘यस भिडियोले देखाउँदछ कि चीनले अमेरिकी सेनालाई चेतावनी दिइरहेको छ कि तनाव बढेमा ग्वाममा रहेको उसको सैनिक अड्डा खतरामा पर्न सक्छ।’
बीबीसी न्यूजमा चिनियाँ मिडिया विश्लेषक क्यारी एलन भन्छन् कि सन् २०१५ मा चीनको शीर्ष मिडिया नियामकले सैन्यको प्रचार विभागलाई केही गम्भीरता देखाउन र अव्यावहारिक कुराबाट अलग रहन स्पष्ट रुपमा भनेको थियो । यो अनौठो छ कि चीनले आफ्नो सेनाको वास्तविक क्षमता देखाउन विदेशी फिल्महरूको सहारा लिइरहेको छ।
चिनियाँ सेनाको ट्र्याक रेकर्ड यो छ कि उसले आफ्नो देशमा लोकप्रियता पाउन त्यस्ता गतिविधिहरू गर्छ । केही मानिसहरू यो पनि भन्छन कि रातो टेपको कारणले चीनले घरेलु दर्शकलाई के देखाउने भनेर निर्णय गर्न असमर्थ छ । तर अहिलेको समयमा सामाजिक सञ्जालमा विदेशी चलचित्र हुन् भनेर थाहाँ पाउँनु कुनै गाह्रो विषय होईन । News Source